Faafida hadda waa dhamaatay! FITUR ma kicisay dib-u-fikirka Dalxiiska Adduunka?
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Caafimaadka » Faafida hadda waa dhamaatay! FITUR ma kicisay dib-u-fikirka Dalxiiska Adduunka?
6 min akhris
FITUR ma ka marag kacay ama xitaa kicisay dhamaadka COVID-19 masiibada?
FITUR, oo ah bandhigga ugu weyn ee socdaalka iyo bandhigga ganacsiga dalxiiska ee Isbaanishka ayaa ka socda magaalada caasimadda ah ee Spain, Madrid.
Spain, Portugal, UK, Netherlands, iyo wadamo kale oo badan ayaa u taagan inay ka tanaasulaan xannibaadaha COVID, dib u furista wadamada xaqiiqo cusub iyo dalxiiska.
Iyada oo leh warshado dalxiis oo dhaawaceysa, oo leh Ururka Dalxiiska AdduunkaUNWTO) iyada oo xarunteedu tahay Spain, oo leh MUUQAAL Ka sii socda Madrid, ma noqon karto wax iska dhacay in Spain ay hadda qorsheyneyso inay u daweyso cudurka Omicron COVID-19 sida hargab kasta oo kale.
Markii ugu horreysay ee lagu dhawaaqay cudurka faafa ee coronavirus, Isbaanishka waxaa lagu amray inay guriga joogaan in ka badan 3 bilood. Muddo toddobaadyo ah, looma ogolayn xataa bannaanka jimicsiga. Carruurta ayaa laga mamnuucay garoommada lagu ciyaaro, dhaqaaluhuna waa istaagay.
Laakiin saraakiishu waxay tixgaliyeen tillaabooyinka adag ee ka hortagga burburka buuxa ee nidaamka caafimaadka. Nafo waa la badbaadiyay.
Isbaanishka ayaa leh heerka ugu sarreeya ee tallaalka Yurub, mas'uuliyiintuna ma dhahayaan mar dambe. Spain waxay isku diyaarineysaa inay daweyso COVID ma aha sida xaalad degdeg ah laakiin jirro halkaas u jooga inuu sii joogo.
Waxay noqon kartaa arrin waqti uun ah in Yurub inteeda kale ay qaadan doonaan habkan cusub ee lagula tacaalayo COVID. Portugal iyo Britain ayaa durbaba ka fiirsanaya.
Midowga Yurub waa inay tixgeliyaan hab la mid ah, waxay ahayd fariinta Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sanchez.
COVID-19 waxaa loola tacaali karaa si la mid ah hargabka ama jadeecada. Waxay la macno tahay in tallaalku kaa caawin doono in laga hortago natiijo halis ah, dadka khatarta sare lehna waxay u baahan yihiin inay ogaadaan oo ay wax ka qabtaan.
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay in ay aad u horeeyso in laga fikiro isbedel kasta oo degdeg ah. Ururku si cad uma laha shuruudo lagu caddeeyo COVID-19 inuu yahay cudur faafa, laakiin khubarada ayaa hore u sheegay inay dhici doonto marka fayrasku aad loo saadaaliyo oo aanay jirin faafitaan joogto ah.
Dr. Anthony Fauci, oo ah ninka mas'uulka ka ah COVID ee Mareykanka, ayaa ka hadlay guddiga Madasha Dhaqaalaha Adduunka Isniintii. Dr. Fauci wuxuu sheegay in COVID-19 aan loo tixgalin karin mid faafa ilaa ay ka gaarto "heerka aan carqaladeyn bulshada."
Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka Dr. Peter Tarlow oo ah khabiir caalami ah oo caan ku ah badqabka dalxiiska, ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray shalay ku sheegay oo markii ugu horreysay la daabacay. eTurboNews: "Waa waqtigii dib loo dhisi lahaa safarka iyo dalxiiska hadda.
"Shabakadda Dalxiiska Adduunka iyo guddigeeda waxay rajeenayaan inay ogeysiiyaan adduunka in WTN ay garab taagan tahay meelaha loo aado iyo socdaalka adduunka iyo warshadaha dalxiiska si ay gacan uga geysato in safarka laga dhigo mid mar kale la gaari karo dhammaan."
Xarunta Yurub ee Kahortagga iyo Xakamaynta Cudurku waxay kula talisay waddammada inay u gudbaan wax ka qabashada joogtada ah ee COVID-19 ka dib markii uu dhammaado marxaladda ba'an ee masiibada. Wakaaladdu waxay bayaan ku sheegtay in dalal badan oo EU ah marka lagu daro Spain ay doonayaan inay qaataan "hab ilaalin waara oo waqti dheer ah."
Ma cadda sida istaraatijiyad cidhiidhi ah ay ula noolaan karto habka "eber-COVID" ee ay qaateen Shiinaha iyo waddamada kale ee Aasiya iyo sida ay taasi u saameynayso socdaalka caalamiga ah.
Dhimashada isbitaallada iyo dhimashada adduunka la tallaalay ayaa saami ahaan aad uga hooseeya kuwii hore.
Boqortooyada Midowday, xirashada waji-xidhka meelaha caamka ah iyo baasaboorka COVID-19 waa la tirtiri doonaa Janaayo 26, ayuu yiri Raiisel wasaare Boris Johnson.
Boris Johnson Shiinaha Covid Covid-19 COVID-19 masiibada Europe Midowga Yurub Caafimaadka Ururka Portugal Spain Dalxiiska Forum Dhaqaalaha Adduunka Ururka Caafimaadka Adduunka Ururka Dalxiiska Adduunka Wtn
Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday dalka Liberia
Aruba waxay ku dhawaaqday shuruudaha gelitaanka cusub ee socdaalka Maraykanka iyo Kanada
Shaaha Cagaaran ayaa soo saara muuqaalka suuqa oo daboolaya ganacsi cusub...
Daawaynta ugu horreysa ee cusub ee lagu beegsanayo dheef-shiid kiimikaadka kansarka
Wharf Hotels oo magacaabay madaxweyne cusub
Sandals Resorts waxay shaqaalahooda ka dhigaan geesiyaal
Rakaabka Yuhuuda ayaa ku eedeeyay Lufthansa inay tahay naceyb
Hawl-wadeennada Dalxiiska Hindiya waxay sheegeen in loo baahan yahay Taageero Dalxiiska ah oo Dheeraad ah
Xagaaga Barbados Boossashada waa kuleyl
Xuquuqda Warqadaha: FAA waa in ay dejiso heerka cabbirka kursiga diyaaradda
FDA waxay ogolaatay Tijaabada Xanuunka Neefsashada ee Dhibka daran
Diiwaangelintu Waxay Ku Soo Gabagabowday Tijaabo Cusub Oo Qufac Raagaysan
Khatarta internetka ee Ruushka ayaa kor u kacaysa
Madaxa ilaalinta xuduudaha Midowga Yurub oo iscasilay sababo la xiriira sharci darro...
Vanuatu waxa ay gashay xidhidh inta ay safarka ku guda jirto
Blossom Hotel Houston Waxa Uu Soo Bandhigayaa Xidhmada Joogista Dheer
Methyl Ethyl Ketone Market 2022 Warshadaha...
Suuqa Inoculants Silage: Siyaabaha Hal-abuurka Mustaqbalka
Suuqa iibka beddelka ee Aasiya Pacific DC waxaa la filayaa inuu...
New Orleans waxay leedahay faafitaanka ugu sarreeya ee Herpes xubinta taranka
Duulimaadyo Cusub oo Kanada ah
Suurtogalka Dalxiiska Hindiya iyo Waxqabadka: Qiimaynta Cusub
Skål International Bangkok Oo Deeq Lacageed Ku Caawinaysa...
Aurora Expeditions martida gaarka ah ee safarka Xeebta UK
Grande Lakes Orlando oo bilawday "Grande"
Skal International Tokyo Oo 500,000 Yen ugu deeqday Ukraine
Baaskiilada Hub Hubka Suuqa Mootada, Ciyaartoyda Muhiimka ah, Kobaca...
Seychelles waxay dib u soo noolaynaysaa Hawlaha Horumarineed ee Gobolka CEE
Erika Budai wuxuu leeyahay,
Janaayo 21, 2022 markay tahay 07:15
Waad ku mahadsan tahay Juergen shaqadaada adag ee raagtay si aad nooga warqabto wararkii ugu dambeeyay ee Dalxiiska Adduunka.